トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ ROM Works
The nepachinko muchina, nguva dzose vakatasva ROM. Saka, chii chinhu nokuda kana ari ROM mhando, ndinoda kutora Kutarira sei zvinoshanda. Nekuti ROM ndiko, kana kuziva jackpot, kuti rine hurongwa, akadai kure uye mabasa, chinhu muchina, akadai mutambo muchina wouropi.
nepachinko muchina jackpot atora munhu rotari hurongwa kuti chose mukana mune zvivezwa zvose. (Zviri hwokungotaura. Unogona kuramba mukana kuti guru raparadza mukana, etc. Horukon ari kwazvo muchikwidza nokuderedza inzwi zvichienderana kuchitoro.) _ X000D_
ose uchitamba mutambo tafura, apo kuzoongorora nepachinko muchina Hodorikyo, pasi rokuongorora , asi ongororo uye kwete mukana wakakwana yakabatanidzwa kuti varege kuyambuka. The
ukoshi dzakatemerwa mumwe muenzaniso, kuti zvionekwe kubva anongoitika nhamba, inonzi mukana wakakwana. Saka, anozunungusa ROM iri worudzii mashandiro, isu acharondedzera sei kuva nokurova guru. Pakati ROM, ine kuverenga kubudikidza pepuranga rimwe chero. Zvadaro, kana anosvika imwe nhamba kukosha, uyewo akadzokorora kuti adzoke 0.
In patafura uchitamba mutambo, balls kuti wose waiva kanda, unotanga vakapoteredza mufananidzo kupinda kutanga chucker, ari ROM panguva iyoyo, rotari rinoitwa, mukati kugadzirwa uye kusvika, kana kuuya kure kana rova ??kare wawana wakaiswa.
uye panguva inotevera rotari, anotanga kuenda shure 0, ndiko rotari panguva yakanga pakutanga chucker kupedzisa. Izvi imhaka yokuti zvakadai anongoitika zvinhu zvakafanana Roulette vanodzosera, mukana iri kunyange 1 of 290 maminitsi, zvinoita kuti haana kuuya kumativi nguva dzose vanoshandura 290 kutenderera. In
, kuti kwaizova kusina guru raparadza mukana kunokosha, asi unogona kufunga, ROM kwenguva yakati, vachaedza Chikazukeyo ari jackpot, iyo yakaitika muchina. Zviri, kana zvichida kuti varove neimwe womuenzaniso akanga ndechokuti converges kune guru raparadza mukana.
nokuti, kana pane nguva apo nokurova guru rinogara, kana kwete kunze Period Ini, zvakadai kuti pane kana ikoko. Nyore akarondedzera ukama pakati ROM uye jackpot, asi nepachinko muchina uri, zvose zviri ROM zvakanaka kwakaita.
Reach yakarova vaviri, rotari panguva apo kupinda angatanga chucker Ko mukuru mhando rinouya iri wakagumiswa. Saka, apo unopfuurira zvaunogona pasinei mukana bhatani, hazvirevi kuti inogona subtracted raparadza, handizivi chete kunakidzwa mashandiro chete.
zvirokwazvo kuverenga raparadza ndechokuti, haukwanisi kunyange munhu kuvanhu nepachinko yokumusoro. hwina ichi zvirokwazvo hunovimbisa, kana ndinofunga kuti akakwanisa kunzwisisa zviri nani kwete pakutanga kunombata.
nepachinko, tinoda zvinhu zvokubheja kana vaya vanoita nani basa. chete anogona kuita, verenga sefungu raparadza pamusoro ROM, kwete chete nezvokuti vanoedza varove kuti zvinhu.
Zvisinei, chikamu Pachinka kunogona hazvirevi kanenge nayo mari mwedzi mamiriyoni 1 Yen.